News 18 Nepal || कोरोनाविरुद्धका खोप बारे डब्लुएचओले किन गर्दैछ चिन्ता ?
एजेन्सी । अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकले कोरोनाविरुद्धका खोपहरु परीक्षण गरिरहेका बेला यसको वितरणमा हुने विभेदलाई लिएर चिन्ता हुन थालेको छ । सबैभन्दा प्रभावित समुदाय र गरिब व्यक्तिमा यो खोपको सर्वसुलभता र पँहुच पुर्‍याउन चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुख डा. टेङेडस अधानोम गेब्रेयसियसले खोपको समान रुपमा वितरण हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संसारभर प्रभावित रहेका नागरिकलाई सहज रुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्‍याउन करोडौं डलरको साझा कोषको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले विभिन्न खोपको सफल जारी रहेकाले उक्त खोप वितरणका लागि अहिले नै तयारीमा जुट्न आवश्यक रहेका बताउनुभएको हो । अमेरिकाको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालले परीक्षण गरीरहेका विभिन्न खोपहरुको प्रभावकारीता बढी रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
ती खोपहरुले ९० प्रतिशतसम्म प्रभावकारीता देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले जनाएका छन् । डब्ल्एचओका प्रमुख डा. टेड्रोसले भ्याक्सीनको परीक्षणले ल्याउन सकारात्मक नतिजाको प्रतीक्षामा आफू रहेको बताउनुभएको छ ।
यसअघि कुनै पनि खोपहरु छोटो समयमा विकसित नभएको भन्दै उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रभावकारीताका बारेमा अझै अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । डब्लुएचओले यसअघि देखि नै कोरोना महमामारीविरुद्धको लडाइ सामुहिक रुपमा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
उसले धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले गरिब र पीडित नागरिकहरुको उपचारका लागि प्रथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भारत, युरोपियन युनियन, अमेरिका, क्यानडा र बलायतले कोरोनाविरुद्धको खोपान बढी चासो देखाएका छन् ।
यता डब्लुएचओले कोरोना खोपको समान रुपमा वितरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्वभर उक्त खोप वितरण थाल्ने डब्लुएचओले जनाएको छ ।
भारतमा खोप लगाएका ६ सय जनामा साइड इफेक्ट, कति गम्भीर ?
कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संख्यामा फेरि बन्यो नयाँ रेकर्ड
डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरीको ह्वाइट हाउसमा बिहेको रौनक !
आज बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिदैँ, यसरी हुदैछ सत्ता हस्तान्तरण
सोमबार ६.४ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प